Lezienụ ụgwọ gị. Ozi gbasara ego nke ụmụ akwụkwọ »Mahadum Hodges
Nabata na Ọrụ Ego Mmụta
Office of University of Office of Student Financial Services na-enye ndị ọkachamara raara onwe ha nye iji nyere gị aka na enyemaka ego, akụkọ ụmụ akwụkwọ, yana azịza ederede.
The ozi nke Office nke Student Financial Services ga-abụ ụmụ akwụkwọ ego ịga nke ọma-lekwasịrị anya na-enye ọkwa kachasị elu nke ọrụ na ohere nha anya na inye ego. Anyị na-abawanye ohere maka nnweta na nnweta site na ịnye ozi gbasara ego ziri ezi yana nduzi na nkwado onwe onye maka ụmụ akwụkwọ na ezinụlọ nọ na gburugburu ebe obibi na-arụkọ ọrụ ọnụ na imekọ ihe ọnụ.
Ozi Kpọtụrụ Ndị Ọrụ Ego
Ịmatakwu banyere Enyemaka ego, dị ka mgbazinye ego ụmụ akwụkwọ etiti / nkeonwe, gọọmentị etiti / steeti, FAFSA, na nyocha FA:
Ekwentị - (239) 938-7758
Faksị - (239) 938-7889
Maka ozi gbasara Akaụntụ ụmụ akwụkwọ, tinyere ụgwọ akwụkwọ / ụgwọ, ịkwụ ụgwọ, atụmatụ ịkwụ ụgwọ, ịgba ụgwọ nke ndị ọzọ, nkwụghachi, ụdị 1098-T, wdg.
Ekwentị - (239) 938-7760
Maka enyemaka na Akwụkwọ Ngwọta, dị ka ihe eji eme ihe (akwụkwọ anụ ahụ, akwụkwọ ntanetị, koodu nnweta), ụgwọ akụ, na ịhazi nkwenye:
Ekwentị - (239) 938-7770
Gesgwọ Resogwọ Maka Universitylọ Ọrụ Mahadum Hodges.
Ọnụ Ahịa Akụrụngwa Ugbu A
Ichoro ikwu ugwo?
Lezienụ nkuzi na ụgwọ gị
Online - ịkwụ ụgwọ nwere ike ịkwụ ụgwọ site na kaadị kredit (MasterCard, VISA, ma ọ bụ Discover) ma ọ bụ site na elektrọnik site na ịga myHUgo.
mail - lelee ịkwụ ụgwọ ị nwere ike zigara na Office nke Mmụta Ego Ọrụ, 4501 Colonial Blvd. Fort Myers, FL 33966. Biko tinye nọmba NJ nwata akwụkwọ gị na nlele. Biko EGOla ịkwụ ụgwọ ego (anyị na-eji obi ụtọ anabata ịkwụ ụgwọ ego n'onwe gị).
Ekwentị - kaadị akwụmụgwọ (MasterCard, VISA, ma ọ bụ Discover) ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ego elektrọnik nwere ike ịkpọ site na ịkpọ (239) 938-7760.
N'ime onwe gị - Mee kaadị akwụmụgwọ (MasterCard, VISA, ma ọ bụ Discover), lelee, ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ego na mmadụ site na ịga na Office nke Mmụta Ọrụ Ọrụ Ndị Mmụta nke dị na Naples ma ọ bụ Fort Myers campuses
Atụmatụ ịkwụ ụgwọ
Nkuzi & ugwo ugwo ugwo di maka umu akwukwo Mahadum Hodges ugbu a. Atụmatụ ịkwụ ụgwọ nwere ike ịgụnye ụgwọ agụmakwụkwọ, ụgwọ mmemme / nkuzi iche, ụgwọ agụmakwụkwọ, ụgwọ ụlọ nyocha, na ụgwọ ndị ọzọ achọrọ. Biko kpọtụrụ ọkachamara na akaụntụ ụmụ akwụkwọ n'ime Office of Student Financial Services site na ịkpọ (239) 938-7760, email sas@hodges.edu, ma ọ bụ ịga na Naples ma ọ bụ Fort Myers campuses iji mụtakwuo banyere atụmatụ ịkwụ ụgwọ.
Akwụkwọ ụbọchị ruru
Nkwụ ụgwọ niile kwesịrị, zuru, site na ụbọchị mbụ nke klaasị mbụ kwa ọnwa 4 ma ọ bụ ndenye aha ọnwa 6 (UPOWER ™ naanị). Maka ama ndị ọzọ, biko lee n'okpuru.
Ọ bụrụ na ị na-eji usoro ịkwụ ụgwọ, biko kpọtụrụ onye ọkachamara na-amụrụ ụmụ akwụkwọ gbasara oge ruru maka ịkwụ ụgwọ ọ bụla.
Biko mara: Paykwụ ụgwọ ga-abụ site na njedebe ma ọ bụ na ị nata nkwupụta tupu ụbọchị ruru.
Mụ akwụkwọ na-enweta Enyemaka Ego
Ndị na-enweta enyemaka ego ga-enwerịrị nyochaa ọfụma ma kwadobe ha na Ọfịs Ndị Ọrụ Ego Ego tupu enwere ike ịkwụghachi nkwụghachi. Ọ bụrụ na agbanyere enyemaka ego, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ nkwụghachi ụgwọ enyere Ngalaba Mmụta Federal ma ọ bụ Ngalaba Mmụta nke Florida dabere na enyemaka enyemaka mbụ enyere.
Mgbanwe na enyemaka ego nwere ike ịbụ nsonaazụ nke mgbanwe na oge akwụmụgwọ, mgbanwe na ntozu onye mmụta maka ụdị enyemaka ụfọdụ, ma ọ bụ enweghị ike izute Ọganihu Mmụta Afọ Ojuju (SAP).
Studentsmụ akwụkwọ na-enweta enyemaka ego nke isiokwu IV nke 1992 Higher Education Act kpuchiri na eze ga-enweta nkwụghachi dịka Nkuzi Mmụta Kasị Elu nke 1998. Mahadum Hodges ga-ekpebi ego enyemaka IV nke nwa akwụkwọ natara ma ghara ị nweta n'oge ahụ nke zuru ezu ndọrọ ego. Onu ogugu nke enyemaka a na-enweta na-adabere na prorated ndabere.
Ozi nkwụghachi nke ụmụ akwụkwọ
Ddọrọ ma ọ bụ ppinghapụ Usoro ọmụmụ
Onye a na-amụrụ ihe nwere ike ịpụ maka ihe ọ bụla kpatara ya ma bụrụkwa onye mezue usoro iwepụ Mahadum dị ka akọwapụtara na Iwu Mwepu. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na nwa akwụkwọ edebanye aha site na ọdụ ndị agha n'ịntanetị, ọ bụ ọrụ nwata akwụkwọ ịwepu site na otu ụzọ ndị agha ahụ.
A na-ewere iwepụ dị ka ụbọchị nwa akwụkwọ ahụ nyefere akwụkwọ ndọrọ ego ma ọ bụ na ụbọchị Mahadum kpebiri na nwa akwụkwọ kwụsịrị ịga akwụkwọ ma ọ bụ daa iwu atumatu agụmakwụkwọ e bipụtara ma wezuga ya na nhazi, nke ọ bụla na-abịa na mbụ.
Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara atumatu iwepụ Mahadum, biko lee Mahadum Ndepụta Okwu.
Dika usoro obula bidoro maka onwa mbido gi (onwa 4), a gha achoputa iru eru ego gi dabere na onodu aha gi iji mata ma / mgbe enyere ego aka ma ma oburu na nwa akwukwo gha enweta ego. Ọnọdụ ndebanye aha nke ụmụ akwụkwọ dabere na oge akwụmụgwọ nke ha debara aha ha.
Mụ akwụkwọ kwesịrị ịma na ha agaghị enweta nkwụghachi ruo oge niile nkuzi na ụgwọ ebubo a kwụọla ụgwọ zuru ezu. Enwere ike ịmepụta ego ọ bụla na akaụntụ ụmụ akwụkwọ ga-abụ opekata mpe ụbọchị 32 mgbe akwụchara ụgwọ akwụkwọ na ụgwọ ụgwọ zuru ezu.
Nkwado Enyemaka Ego
Biko lee Ndenye aha ndebanye aha n'okpuru iji nyochaa enyemaka ego iru eru dabere na awa akwụmụgwọ na-arụ ọrụ:
Ọnọdụ ntinye aha
Nke Na-erughị Oge-Oge Ọkara Oge ¾ Oge Oge niile
Oge E Si Nweta Arụ Ọrụ 1 - 5 6 - 8 9 - 11 12 ma ọ bụ karịa
Federal PELL Grant * Kwesịrị ekwesị Kwesịrị ekwesị Kwesịrị ekwesị Ikike zuru ezu
Federal SEOG * Ekwesighi Kwesịrị ekwesị Kwesịrị ekwesị Ikike zuru ezu
State EASE Grant * Ekwesighi Ekwesighi Ekwesighi Ikike zuru ezu
Steeti FSAG * Ekwesighi Ekwesighi Ekwesighi Ikike zuru ezu
Ego Federal * Ekwesighi Ikike zuru ezu Ikike zuru ezu Ikike zuru ezu
* Dabere na ntozu ntozu ụmụ akwụkwọ maka enyemaka gọọmentị etiti / steeti.
Biko lee nkwụghachi na ozi nkwụnye ego maka ụbọchị inyeaka na Kalịnda Ihe Omume Mmụta myHUgo.
Choputa ihe banyere enyemaka ego
1098 - msdị
Uru ụtụ maka agụmakwụkwọ ka elu, n'iji Taxdị Usingtụ Isi nke 1098-T
Ohere American (olile anya olile anya) na onyinye mmụta maka ndụ na-enyere gị aka ma ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ agụmakwụkwọ ka elu. Iji nyere gị aka ị nweta akara a, Mahadum Hodges ga-etinye akwụkwọ ụtụ isi nke 1098-T na Relọ Ọrụ Na-enweta Ego (IRS) site na Machị 31st nke afọ ọ bụla.
Ihe omuma a adighi egosi atumatu ego site na mahadum, ebe obu na obu oru nke onye na acwo ego ikpebi iru eru maka otuto. Biko akpọtụrụla Mahadum Hodges gbasara ndụmọdụ ụtụ isi maka kredit a. Iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere ụtụ isi ụtụ isi nke American Opportunity and Life Life, biko rụtụ aka IRS Publication 970 - Uru Uru maka Agụmakwụkwọ Ka Elu ma ọ bụ kpọtụrụ Relọ Ọrụ Ego Na-abata na (800) 829-1040. Maka ajụjụ a kapịrị ọnụ gbasara ozi enyere n'ime ụdị ụtụ 1098-T, biko kpọtụrụ Mahadum Hodges na (239) 938-7760.
1098-T Formdị FAtụ Ajụjụ
Inggba gwọ Nke Atọ
Mgbe otu nzukọ, nke na-abụghị nke nwa akwụkwọ ma ọ bụ ndị ezinụlọ ha, mere nkwa iji kwụọ ụgwọ agụmakwụkwọ nke nwa akwụkwọ, a na-ahụta ha dị ka ndị na-akwado ndị ọzọ site na Mahadum Hodges. Mgbe ugwo ruru na akaụntụ nwata akwụkwọ, Mahadum ahụ kwadoro ya. A na-ahụta usoro ịkwụ ụgwọ a ka ịgba ụgwọ nke ndị ọzọ.
Paymentskwụ ụgwọ ndị na-akwado ha nọ n'okpuru otu mkpesa gọọmenti etiti chọrọ ka enyemaka ego ọzọ. Sponfọdụ nkwado anaghị achọ akwụkwọ ịgba ụgwọ ma ọ bụ mahadum na-elekọta ya site na Office nke Student Financial Services.
Ma ị bụ nwa akwụkwọ ma ọ bụ onye nkwado, ị ga-achọta azịza na ajụjụ a na-ajụkarị (Ajụjụ) banyere otu ịgba ụgwọ nke ndị ọzọ na otu esi akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ ma ọ bụ chọọ ịmatakwu ozi, biko kpọtụrụ Office of Student Financial Services na (239) 938-7760 or sas@hodges.edu.
Partygba Billgwọ Thirdgwọ Nke Atọ nke Ndị Nkwado
Partygba Billgwọ Thirdgwọ Nke Atọ maka Studentsmụ akwụkwọ
BankMobile, Ngalaba Ahịa Ahịa, na-ahazi nkwụghachi enyemaka ụmụ akwụkwọ maka Mahadum Hodges yana ọtụtụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ndị ọzọ dị elu na United States. Maka ozi ndị ọzọ gbasara BankMobile, gaa na njikọ a.
pịa ebe a iji lelee nkwekọrịta ụlọ ọrụ anyị na BankMobile, ngalaba nke Ahịa Ndị Ahịa.